हाम्रो शरीरका यी अंगहरुमा अचम्मका संकेत किन देखिन्छन् ? जान्नुहोस | सुदुरपश्चिम खबर
हाम्रो शरीरका यी अंगहरुमा अचम्मका संकेत किन देखिन्छन् ? जान्नुहोस
हाम्रा शरीरका अंगहरुलाई नशाले जोडिएका छन् । एउटा अंगको सम्बन्ध अर्को अंग संग हुने गर्छ । नशाले जेलिएको हाम्रो शरीरले विभिन्न अवस्थामा विभिन्न संकेत दिने, क्रियाकलाप गर्ने गर्छ । शरीरका अंगहरुले केही साधारण तर अचम्म लाग्ने संकेतहरु देखाउँछन्, जसको प्रत्यक्ष कारण हामीले देख्न सक्दिनौं ।
हात खुट्टासँगै छालामा यी परिवर्तन देखिए ?
डाइटिङका हुनसक्छन् यस्ता साइड इफेक्टहरु !!
वृद्ध वृद्धाहरुले वर्षाको अनुमान गर्छन् र वर्ष हुन्छ पनि । यसको कारण यो हो कि, जब मौसममा कुनै बदलाव आउन थाल्छ, उनीहरुका विभिन्न अंग, अझ विशेष गरि जोर्नीहरु अप्ठ्यारो हुने, दुख्ने हुन थाल्छ । हावाको दबाब कम हुनु , मौसममा परिवर्तनको संकेत आउनुले उनीहरुको शरीरमा पनि फरकपन महसुस गराउँछ, किनकी उनीहरुको शरीर कमजोर भएको हुन्छ र त्यो परिवर्तनलाई छिटो स्विकार्न सक्दैन ।
आँखा फर्फराउनुलाई हाम्रो समाजमा शुभ र अशुभसंग जोडिन्छ । तर आँखा फर्फराउनुको वैज्ञानिक कारण भने अर्कै छ । आँखामा केही एलर्जी हुनु, आँखामा परेको तनाव आदिका कारणले आँखा फर्फराउँछ । सबैभन्दा बढी देखिने कारण भने, आँखामा बस्ने सानो किरा हो । त्यो किराले कुनै हानी गर्दैन र संसारका धेरैजसो व्यक्तिहरुको आँखामा त्यो किरा जाने गर्छ ।
मानिसको जिब्रोको प्रिन्ट हरेकको फरक हुन्छ । त्यसैले जिब्रोको आकार, रंग आदिमा पनि फरक देख्न सकिन्छ । जसरि औंलाको छापका आधारमा व्यक्तिको पहिचान खुल्छ, त्यसरी नै जिब्रोको आधारमा पनि व्यक्तिको परिचय खुल्न सक्छ । मानिसको खुट्टा बढ्न कहिले पनि रोकिंदैन । शरीरको उचाई बढे पनि पाइताला भने बढिरहेको हुन्छ । उमेर बढ्दै गएपछि केही मानिसको पाइतालाको चौडाई बढिरहेको हुन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा शरीरका नशाहरु खुकुलो हुने भएका कारण पाइतालाको चौडाई बढेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोसः यो कुरा सुरु भएको थियो २०७४ सालको नयाँ वर्षको दिन। बैशाख १ गते निन्द्राबाट ब्युझिए लगतै देब्रे हतको नाडीमा केही असहज महसुस भएको थियो। खस्रो चिज हातमा कोरिएको थियो, हेर्दा ट्याटुजस्तो देखिने छाम्दा भने कुनै कुरा टाँसिए जस्तो। बेलुका सुत्दा सामान्य नै रहको हातमा एकाबिहानै आएको अस्वभाविक परिवर्तनसंगै अनौठो अनुभुति भएपनि म डराएँ। छिटो छिटो खाटबाट उठेर बाथरुम पसेर हातमा साबुन लगाएँ।
मज्जाले मिचे,पखाले। सो ट्याटु जस्तो चिज पखालिएन, बरु त्यसको रंग चेन्ज भयो। कालो गोलो घेरा देखियो। गोलो घेरा भित्र रेखाहरु आफसे आफ कोरिन थाले। हेर्दा हेर्दै गोलो आकारको दाँया बाँया घडीको दम जस्ता दुई आकार देखियो। अब घडी जस्तो आकृति प्रस्ट देखियो। घडीको १२ अंकको ठाउँमा एउटा सानो थोप्लो र ६ अंक रहने ठाउँमा अर्को थोप्लो देखे।
पानीभित्रबाट सहतमा निस्केसरी छालामा बिस्तारै तीनवटा फरक(फरक रंगका सुईहरु प्रस्ट देखिन थाले। रातो रंगको धर्सो १२ अंकतिरको थोप्लो तिर सोझियो। निलो र हरियो रंगको सुई ६ बजेको थोप्लो तिर तेस्रियो। सुईहरु देखिएको ठाउँ छाम्दा पनि महसुस हुन्थ्यो।बाथरुमबाट निस्किए।
सोच्दै नसोचेको क भयो, कसलाई भन्ने मन डरायो। ‘के भएको देखाउन हस्पिटल जाउँ कि? फेरी दुखेको पोलेको केही छैन। के होला पहिले पत्ता लगाउनु पर्ने सोचे। सोच्दा सोच्दै कोठा बाहिर निस्के। नजिकै रहेको सानिमाको घर तिर तेर्सिए। सानिमाको छोरा मैरै उमेरको थियो। उसैले भन्ने आँटेर कल गरे। ‘आयुष कता छस्?’ ‘घरमा’ ‘म आउँदै छु है’ ‘ओके’, उसले फोन राख्यो।
हातको अनौठो घडी हेरे। घडीमा देखिएको दुईवटा दाँयाँबाँया रहेका दमजस्ता मध्ये एउटा अलिक बाहिर र अर्को केही भित्र छिरेको जस्तो थियो। बाहुला सारेर त्यसलाई छोपी बानेश्वर तिर लम्के। बानेश्वर चोकमा बाटो काट्नेको भित्र सदा झै बाक्लो थियो। कलेज जान लागेका केटीहरु चर्को स्वरमा गफ गर्दै थिए।
चोकको बिचमा ट्राफिकको सिठ्ठिको आवाज झनै चर्को थियो। धुवाँ, धुलो, कोलाहाल, यो भन्दा त गाउँकै वातावरण ठिक। गाउँसंग तुलना गर्दै मान्छेको भिड भित्र बाटो काट्न उभिरहेको थिए। बाहुला सारेर घडी हेरे। त्यो बाहिर निस्किएको जस्तो दम थिचेझै औलाले धकेलेको मात्र के थिए, त्यो त साच्चै थिचियो, भित्र पस्यो। यो भित्र पस्नासाथ पहिले दबिएझै रहेको अर्को तिरको दम फुत्त बाहिर आयो। १२ बजे तिर तेर्सिएको रातो सुइ ६ बजेमा झर्यो।
निलो सुई १२ तिर तेर्सियो। हरियो सुईमा कुनै हलचल देखिएन। छालाको सहतमा आएको हलचलबाट आँखा उठाए, अर्को अनौठो घट्यो। वरिपरि रहको बाटो काट्नेको भिड गायब! वरिपरि हेरे, डाँडापाखा अनि वनजंगल मात्र।
ती डाँडापाखा अरु कतै नभइ उही पुरानो गाउँको थियो, जुन केही बेर अघि सम्झदै थिए। यताउता डुले, बानेश्वरबाट एकाएक गाउँमा कसरी आइपुगे, केही बुझ्न सकिन। हातको घडी हेरे। घडीको कालो गोलाकार आकार कालो थिएन। बरु चम्किलो सेतो गोलाकार भित्र रातो, निलो र हरियो सुई प्रस्ट थियो। घर भएको ठाउँमा आइपुगे। अर्को अनौठो भयो। ठाउँ त त्यहि थियो तर त्यहाँ घरको कुनै नामनिशान थिएन। केही बेर बसेर केही परको बजार तिर लागे।
बजारमा सबै घरहरु उस्तै छन्। चलहपलह उस्तै छ। मोबाइल निकालेर समय हेरे। मोबाइलमा सवा सात बजेको थियो। बिहान कोठाबाट निस्किदा सात बजेको थियो। त्यहाँबाट बानेश्वर पुग्दा सवा सात भएको हुनुपर्छ। बाटोकाट्न केही मिनेट बसे, अनि एकाएका गाउँमा पुगेको प्रस्ट याद छ। बजार आइपुग्नु अघि घर हुनुपर्ने ठाउँमा १० मिनेट त बसेको हुदो हुँ। तर मोबाइलमा सवा सात मात्र किन, रहस्यहरुको चाङ एकपछि अर्को थपिदै गयो। frommandu
अनुहारमा वाक्स गर्नु कति सही ?
बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छ ?
पेटको बोसो सजिलै हटाउन चाहाउनुहुन्छ भने फलो गर्नुहोस् यी उपायहरु !!
के राति सुत्दा मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ ? हुनसक्छ यस्तो खतरनाक बिमारीको संकेत !!
दैनिक २-३ वटा काजु खानुको अनेकौं फाइदाहरु यस्ता छन, जानी राखौं
पायल्सको लक्षण तथा बच्ने उपायको बारेमा जान्नुहोस्, जानकारीको सेयर गरौं
कहिल्यै टुट्दैन यी २ राशिको सम्बन्ध, एकअर्कालाई गर्छन आफूभन्दा धेरै विश्वास !!
स–साना कारणहरु जसले मान्छेमा प्रेम भावना टुट्छ !!
प्रचण्डको गुनासो : मभित्र आतंक छ, क–कसलाई मन्त्री बनाउने ?
राजकिशोरले महन्थ ठाकुुरलाई भने : अर्को पार्टी बनाउन साथ दिन सक्दिन